Tag: Kpọtụrụ Kọntaktị | Martech Zone
Kpido: Kpọtụrụ Kọntaktị
Wednesday, February 13, 2019 Wednesday, February 13, 2019 Pauline Farris kwuru
O doro anya na ịre ahịa email nwere ike ịbụ otu n'ime ụzọ kachasị dị irè iji rute ndị ahịa. O nwere ROI nkezi nke 3800 percent. O doro anya na ụdị ahịa a nwere nsogbu ya. Ndị azụmahịa ga-ebu ụzọ dọta ndị debanyere aha ha nwere ohere ịtụgharị. Mgbe ahụ, enwere ọrụ nke ibe na ịhazi ndetu aha ndị ahụ. N'ikpeazụ, iji mee ka mgbalị ndị ahụ baa uru, a ga-aharịrị mkpọsa email